पीसी को लागी १० सर्वश्रेष्ठ बाँच्न खेलहरु ग्याजेट समाचार
पीसीको लागि १० सर्वश्रेष्ठ बाँच्ने खेलहरू
हाम्रो पीसीहरूको बढ्दो क्षमता र बढ्दो परिष्कृत ग्राफिक्स इञ्जिनहरूले जीवन र विविधताले भरिएका छन् जुन निस्सन्देह धेरै अनुयायीहरू छन्। हामीसँग छ पोस्ट अफोकल्याप्टिक संसारहरू जोम्बीहरू, अन्तरिक्ष ओडिसीहरू, समुद्री जहाजहरूमा समुद्री समुद्री किनारहरूमा आक्रमण गरे, डायनासोरको उमेर सम्म। विभिन्न संसारहरू जुन समान पैटर्नमा मिल्दछ, बाँच्नको लागि मात्र उद्देश्यको रूपमा।
यस लेखमा हामी १० समीक्षा गर्न चाहन्छौं जुन हाम्रो विचारमा शैलीलाई सबैभन्दा धेरै चिह्नित गरिएको छ, जुन कम्पनीमा र एक्लै दुबै महीनासम्म हाम्रो अनुभवलाई रोमाञ्चक बनाइराख्न सक्षम छ। केहि पनि लामो हुन्छ जब तपाईं जीवित हुनुहुन्छ, शिकार गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, भागेर जानुहुन्छ, खानुहुन्छ, निदाउनुहुन्छ र सबैभन्दा माथि कुनै किसिमको कठिनाइको बिरूद्ध लड्नुहुन्छ। सहकार्यको अतिरिक्त, केहि चीज जसले निस्सन्देह यो रोमाञ्चक भिडियो गेम शैलीमा चीजहरू हाम्रो लागि सजिलो बनाउँदछ। हामीसँग रहनुहोस् पीसीको लागि बाँच्नको १० उत्तम उदाहरणहरू।
1 जहाज: बचाउको विकसित
4 कनन Exiles
6 स्टेट अफ डेन 2
7 हरियो नरक
जहाज: बचाउको विकसित
डायनासोरको युग यस रोमाञ्चक पहिलो-व्यक्ति अस्तित्व खेलको साथ हाम्रो जीवनमा फर्कन्छ। यो बजारमा सब भन्दा परिष्कृत भिडियो गेम होईन, तर यदि हालका बर्षहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय र रमाइलो मध्ये एक हो। योसँग धेरै विशेषताहरू छन् जसले यसको विकासलाई महान बनाउँदछ र अस्तित्व र कार्यको समृद्ध अनुभव। सबै डायनासोरले भरिएको खतरनाक टापुमा ठाउँ लिन्छ।
खेल खुला संसारमा छ, त्यसैले हामी सुरुदेखि नै सम्पूर्ण नक्शा अनलक छ, यो प्रारम्भिक पहुँच खेलको रूपमा शुरू भयो त्यसैले प्रारम्भिक प्रयोगकर्ताहरूले अनगिन्ती बगहरूबाट भोगेका थिए जसले यसको गहिरो आनन्द लिनबाट रोक्दछ। अब हामी एक साहसिक सामना गर्नु परेको छ जसमा सुरक्षित रहनु पर्ने हुन्छ खाना र पानी पाउनुहोस्, तापमान मा अचानक परिवर्तन गर्न अनुकूल।
यदि हामी विच्छेदन गर्छौं भने पनि, हाम्रो चरित्र संसारमा डुबेको छ, त्यसैले यो एक शरणस्थान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण छ जहाँ हामी रातमा यस क्षेत्रका खतराहरूबाट सुरक्षित बिताउन सक्छौं। हामी आफ्नै खाना र हुर्कन सक्छौं अन्य बासिन्दाहरूको साथ एउटा गोत्र बनाउनुहोस्यो अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ किनकि सहयोगले हाम्रो जीवन बचाउन सक्छ।
अरू जस्तो फरक र अनौंठो खेल, जसमा हामी एक सुन्दर पानीमुखी संसार भेट्टाउँदछौं जुनमा हामी प्रवेश गर्नुपर्दछ, अनमोल साथ साथै खतरनाक पनि। हामी एक विदेशी भूमिगत दुनिया प्रवेश गर्नेछौं जसमा सबै प्रकारका प्राणीहरूको जीवन बगिरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको लुकेका सबै खतराहरूबाट जोगिनु हो जुन बीचमा जीवजन्तु खडा छ, यो पहिले देखिन सक्ने भन्दा बढी घातक छ।
हामी शरण लिनका लागि धेरै इच्छुक हुनेछौं जहाँ हामी आराम गर्न सक्दछौं र यसको लागि हामी विस्तृत नक्सा भरिका स्रोतहरू खोज्नेछौं। लामो यात्रालाई थप सहन योग्य बनाउन र यी खतरनाक जीवहरूलाई जोगाउन हामी आफ्नै गाडीहरू निर्माण गर्न सक्दछौं त्यो सबै कुनामा लुकेको छ। Subnautica एक सिफारिश गरिएको खेल हो यदि तपाईं एक सुन्दर र खतरनाक अनुभवको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ।
एउटा डरलाग्दो विमान दुर्घटनाबाट बच्न तपाईंलाई के हुन सक्छ जुन खराब हो? हामी सोच्दछौं कि त्यो दुर्घटना भोगे पछि हामीलाई के हुने कुनै पनि कुरा खराब हुन सक्छ, तर हाम्रो नायकको भित्र पुग्नको लागि खराब भाग्य छ। उत्परिवर्ती नरभक्षीहरूले भरिएको विशाल वन, शुद्ध शैलीमा पहाडका आँखा छन्। खेलले हामीलाई ट्रस प्रदान गर्दैन, किनभने जहिले पनि हामीलाई भावना छ कि केहि ले हामीलाई हेरिरहेको छ र हामीलाई आक्रमण गर्न लागेको छ। कहिले पनि सुरक्षित नभएको महसुस गर्दै हामी आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई तल झार्न सक्दैनौं किनकि कुनै पनि क्षणमा हामी भाग्नुपर्नेछ वा झगडाको सामना गर्नुपर्नेछ।
यस साहसिक कार्यको प्रत्येक रूख पछाडि खतराहरू हुन्छन्, खतराहरू जुन हामीले सामना गर्नुपर्दछ, यसको बिरूद्ध एक राम्रो स्रोत हतियारको सृजना हो। चिसोसँग लड्न हामी आफ्नो शिविर र बोनफाइरहरू निर्माण गर्नेछौं। तर हामी सँधै लुकाउन सक्दैनौं, किनकि हामीले यात्रामा बढ्नको लागि आपूर्ति र स्रोतहरू संकलन गर्न अन्वेषण गर्न आवश्यक पर्दछ।
नामले संकेत गरे जस्तै यो खेल हो कानन बार्बेरियन को वातावरण मा आधारित छ। यस्तो संसार जहाँ हामीले आफ्नो कुलको गौरव फेरि प्राप्त गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्दछ र अधिकतम सम्भावित क्षेत्रहरु लाई जित्नु पर्छ। हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीले तत्वहरू र संसाधनहरूले भरिएको ठाउँहरूको धनी संसारको अन्वेषण गर्नै पर्छ, तर चिसो र तातो दुवै घातक हुन सक्छ को रूप मा मौसम मा सधैं ध्यान दिएर। हामीले निर्दयी मानव शत्रुहरू तर जीवहरूको सामना गर्नेछौं।
सुरुमा यो धेरै आधारभूत खेलजस्तो देखिन्छ जहाँ हामी केवल लडन्त र आराम गर्छौं, तर यसको विश्व कुनामा भरिएको छ जहाँ हामी पत्ता लगाउँदछौं। धेरै लुकेका रहस्यहरू। हामीले कुल, घेराखाना, शहरहरूको निर्माण र उनीहरूको रक्षा बीच लडाईं सामना गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं क्यानन ब्रह्माण्डको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, यो खेलले तपाईंलाई घण्टाको रमाईलो खर्च गर्न बनाउँछ।
पीसीमा अस्तित्व विधाको एक अग्रगामी, प्रशंसकहरू बीच ज्ञात र धेरै लोकप्रिय छ apocalyptic दुनिया एक ज़ोंबी महामारी द्वारा ग्रस्त। उनीहरूका खेलहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन छन्, जसमा हामी विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूलाई भेट्ने छौं, तर पनि हामी हाम्रा साथीहरूसँग खेल्न सक्दछौं र आफ्नो बचावको लागि राम्रो टीम खडा गर्न सक्दछौं दुबै मृतक जो हामीलाई निल्न चाहान्छन्, र मानव दुश्मनहरू जसले हामीलाई लुट्न चाहान्छन् हामीले प्राप्त गरेका सबै चीजहरू राख्न।
चेर्नारस, खेलको दृश्य एक विश्व हो जुन यो महामारीको कारणले यसका नागरिकहरूलाई त्यागेको र उपेक्षाले ग्रस्त छ, जहाँ यसको सडकमा छोडियो केवल मरेका छैन। हामी बाँच्न सक्दछौं र हाम्रो घाउहरू होशियार हुनुपर्दछ किनकि तिनीहरू संक्रमित हुन सक्छन् वा रोगहरू पनि समात्न सक्छन्। मौसम पनि महत्त्वपूर्ण छ र हामीले आफ्नो आश्रय घर बनाउनु पर्छ, किनकि यो केहि स्थानहरू मध्ये एक हुनेछ जहाँ हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सक्छौं। केवल नकारात्मक पक्ष भनेको समुदाय हो, विकासकर्ताहरु द्वारा रखरखाव गरीब छ र केही प्रयोगकर्ताहरु ह्याकमा रिसाउनमा संलग्न छन् बाँकी प्रयोगकर्ताहरूलाई।
स्टेट अफ डेन 2
अधिक मरेका र अधिक संसारमा महामारीले नाश गरेको यो अस्तित्व भिडियो गेमको कलिंग कार्ड हो। यस अवस्थामा, प्रत्येक खेल फरक हुन्छ, किनकि प्रत्येक पटक हामी हासिल गर्नका उद्देश्यहरू सुरु गर्छौं र त्यहाँका बासिन्दाहरू फरक हुनेछन्।। मात्र हामी बाँच्न zombies सामना गर्नुपर्नेछ, हामी पनि हाम्रो आश्रय लुट्न चाहने अन्य मानिसहरु लाई धेरै सावधान हुनु पर्छ।
खेल अनलाइन छ तर एकल प्लेयर पक्ष रमाईलो र इनामदायी छ। केहि साथीहरूसँग यसलाई अनलाइन खेल्न सुझाव दिइन्छ र अनुभवलाई अझ गहिराइमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुहोस्, जहाँ सेनाहरू सामेल गरेर साझा गर्ने र झगडा गर्नु हाम्रो उत्तम सम्पत्ति हुनेछ। यो सबै को लागी हामी लगातार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछौं, जसले हामीलाई प्रगति गर्न र भावना राख्दछ कि प्रत्येक पटक जब हामी खेल्दछौं हामी थोरै सुधार भएको छ।
हरियो नरक शीर्षक को रूपमा हामीलाई बताउँछ, यो भिडियो खेल हो अमेजन जंगलमा सेट। हामी यस सुन्दरमा पूर्ण रूपमा एक्लो हुनेछौं तर समान समयमा भयानक परिदृश्य, जहाँ हाम्रो मुख्य कार्य अस्तित्वको लागि लडाई गर्नु हो। हामी आफैले खाना पकाउन वा न्यानो बनाउन आगो बनाउनको लागि मात्र प्रबन्ध गर्नुपर्दैन, हामीले आफ्नो आश्रय बनाउने वा गुफामा यसका लागि आवश्यक पर्ने खतरा सहित एउटा मार्ग पनि खोज्नुपर्नेछ।
यो जival्गलीमा अस्तित्वमा रहेको खेल जस्तो देखिन्छ, जबसम्म हामीले यो महसुस गर्दैनौं कि हाम्रो नायकले उसको दिमाग हराइरहेको छ। मानौं यो ड्राफ्टको स्थितिमा यो पूर्ण रूपमा संकुचन योग्य छ। हामी भोकाउँदा मर्दैनौं, तर हामीले सम्भावित कुनै घाउ वा संक्रमणलाई पनि निको पार्नुपर्नेछ। यसले समृद्ध शरीर निरीक्षण प्रणाली समावेश गर्दछ, जुन यसलाई निको पार्न हामीलाई सजिलो बनाउँदछ। हामी एक्लै साहसिक वा सहकारी मल्टिप्लेयरको मजा लिन सक्दछौं।
रस्टमा रोम साहस सुरु हुन्छ जब हामीलाई संसारमा ल्याइयो, पूर्ण रूपमा ना naked्गो, जसले परिस्थिति कम गर्न अगाडि बढ्नु पर्ने अत्यावश्यक आवश्यकतालाई व्यक्त गर्दछ। हामी आगो बनाउनको लागि ढु stones्गा र लगहरूको खोजी गर्नेछौं, मासुलाई आफैंलाई खुवाउनका लागि र खालका लुगा लगाउँनका लागि। यो सजिलो देखिन्छ, तर खेल अन्य मानव प्रयोगकर्ताहरूले भरिएको छ जुन प्राय जसो हामीलाई लुट्न चाहान्छन्। त्यसकारण हामीले उनीहरूसँग विजयी हुन संघर्ष गर्नुपर्दछ।
जंगली जनावरहरू र मानिसहरु रस्ट मा एक स्थिर हो, त्यसैले हामीले हाम्रो गाउँ निर्माण र यसलाई सुदृढ पार्न को लागी उनीहरु लाई आफूलाई बचाउन को लागी छ। यो एक अनलाइन खेल हो त्यसैले मानव संसारभरका अन्य खेलाडीहरू हुन्। कुञ्जी भनेको वस्तु क्रिप्टिंग हो, निर्माणमा स्पष्ट फोकसको साथ। हामी अगाडि बढ्दै जाँदा हामी यो देख्नेछौं सबै भन्दा राम्रो विकल्प अरू खेलाडीहरूसँगको गठबन्धन हो सबै खतराहरू बिरूद्ध लड्न र संसाधन साझा गर्नुहोस्।
सबै समयको सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो खेल, निस्सन्देह यस विधाको लोकप्रियताको उत्कृष्ट उदाहरण। यो सबै दर्शकहरूको लागि एक राम्रो खेल हो तर दुश्मनी पूर्ण। यस शीर्षकको पक्ष निस्सन्देह वस्तुहरूको शिल्प र पूर्वाधारहरूको निर्माण हो। जब सबै चीज शान्त देखिन्छन्, हामी दुश्मनहरू द्वारा आक्रमण गर्न सकिन्छ, जीवदेखि लिएर अन्य प्रयोगकर्ताहरू सम्म।
अनगिन्ती दुश्मनहरू तपाईंको विशाल विश्वमा बसोबास गर्दछ, त्यसैले जतिसक्दो सम्भव संसाधनहरू संकलन गर्न प्रत्येक क्षणको फाइदा लिन सुविधाजनक छ। अन्वेषण खेलको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष होकिनकि हामी अग्रिम हुने कि नगर्ने भन्नेमा निर्भर गर्दछ, हामी धेरै कोठाहरूमा प्रवेश गर्नेछौं र यसको लागि हामी हतियार र हतियार दुवै राम्रोसँग तयार हुनुपर्नेछ।
हामी अरूसँग केहि फरकको साथ सूची समाप्त गर्दछौं, एउटा अन्तर्ग्रहणीय खेल जहाँ हामी अन्वेषण गर्छौं अर्को सौर्यमण्डलका सात ग्रहहरू। हामी भूभाग परिमार्जन गर्न र इच्छा मा प्रत्येक ग्रह को प्रत्येक इन्च अन्वेषण गर्न सक्ने क्षमता छ। यस विधामा सामान्य रूपमा सबै प्रकारका स्रोतहरू स collect्कलन गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ, र आराम गर्नको लागि सवारीहरू वा अड्डाहरू सिर्जना गर्न।
यस सूचीका प्रायः सदस्यहरू जस्तै यो सहयोगात्मक ढंगले खेल्न सकिन्छ, जसले खेल विकल्पहरूको विस्तार गर्दछ। हामी केवल सतह अन्वेषण गर्न सक्दैन, हामीसँग भूमिगत भूमिगत पनि हुनेछ जहाँ खोज्नु पर्ने बहुमूल्य खजानाहरू लुकाइनेछ र साथै हाम्रा जहाज सुधार गर्नका लागि सामग्री पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » घर » भिडियो खेलहरू » पीसीको लागि १० सर्वश्रेष्ठ बाँच्ने खेलहरू
शुभ साँझ, मलाई थाहा छैन यसमा टिप्पणी गर्न यो सही ठाउँ हो, यदि होईन भने, म माफी चाहन्छु! मुख्य कुरा के हो भने मेरा साथीहरूसँग हामी बार्सिलोनामा निजी जासूसहरू हुन खेल्छौं र अब हामी घरमै छौं कि हामी केही जासुसी पीसी खेल खेल्न चाहन्छौं, के तपाईं सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ? हामी धेरै वेबसाईटहरूमा खोजी गर्दैछौं र हामी फेला पार्न सक्दैनौं। धेरै धेरै धन्यवाद !!